फित्कौली हास्यव्यङ्ग्य सङ्ग्रह - ढर्रा
ढर्रा शेषराज भट्टराई
ढर्रा तपाई हामी जो कोहीले पनि देखे भोगेको र जानेकै कुरा हो । मान्छेले ढर्रा नपार्ने भनेको जन्मिँदा र मर्दा मात्र रहेछ । अन्यावस्थामा ढर्राको पर्रा छर्रा जारी रहन्छ ।
ढर्रालाई शिष्ट भनौ या विशिष्ट शब्दमा अतिरञ्जित भन्नु पर्छ । चाहिँदोभन्दा बढी भए पछि अतिरञ्जित या ढर्रा हुन्छ । नक्कल झक्कल यसका पर्याय हुन् । आफ्नै आमा बाबुले छोरा छोरीलाई बेला बेलामा सहिमार्गमा ल्याउन चेतावनी दिँदै भन्ने गर्छन् “धेरै ढर्रा नपार है सुम्ल्याइ दिउँला” । नक्कल झक्कलले नेटो काटेपछिको वस्तु स्थितिलाई ढर्रा भन्ने चलन पुरानै हो । ढर्रा त्यसलाई पनि भनिन्छ जहाा आवश्यकता भन्दा बढी फुर्का, फुँदा र तामझाम गरिन्छ । भन्नेहरूले निस्फिक्री भन्ने पनि गर्छन् “नेपाल सरकारको कार्यालयहरूमा कामभन्दा बढी ढर्रा हुन्छ ।”
पवित्र मनले एकले अर्कालाई कसैले कसैलाई पनि मर्का नपारौँ भन्ने हो भने ढर्रा लोप हुने रहेछ । ज्ञात अज्ञात ढर्राको अस्तित्व÷जगेर्ना र मलजल गरेर हुर्काउने, बढाउने, फुलाउने, फलाउने, फैलाउने, अहं भूमिका नेपाल सरकारका आंगिक निकायले गरेका छन् भन्दा त्यति वित्याँस नपर्ला । आत्मा साक्षी राखी तामा, तुलसी, गीता छोएर भन्ने हो भने बिना झन्झट ढर्रा नपारीकनै सहज र सरल तरिकाबाट सरकारी काम काज फत्ते गरिने कुरा सत्य हो । तर जब सरकारी अफिसका ब्रह्माचारी कर्मचारीबाटै शर्मचारी परसारी गोजी भर्नेको खोजी हुन्छ तब सोझा सिदा नागरिक ढर्राको फेला पर्छन् । अति ढर्रामा नागरिकको रिसको पर्रा ज्यादा हुन्छ तब गोजी भर्नेको खोजीको विरुद्धमा अख्तियार गुहारिन्छ । तर के गर्नु दुधको साक्षी बिरालो । रिस खा आफू बुद्धि खा अर्काे भनेझै मान्नु भएन झर्काे । ढर्राले नै सिर्जना गर्छ लाइनको लर्काे । कर्मचारीमा आआफ्नो पेट ठूलो बनाउन हुने गर्छ झर्काे फर्काे । जनतालाई सताउन स्वर हुन्छ चर्काे चर्काे । कसैले भन्छन् ठर्रा खान ढर्रा पार्छन् । पैसा झार्छन् । जनता मार्छन् । त्यसैले भन्ने गर्छन् सरकारी काम कहिले जाला घाम । अल्याङ टल्याङ ग¥यो दिन बितायो । नियोजित ढर्रा चितायो बस्यो ।
नेपाल सरकारले देश विकास तीव्र गतिले अगाडि बढाउन विभिन्न चरणको ढर्रा र तामझाम पार गरेपछि कारिन्दालाई कामको अनुमति दिन्छ । अनुमति पाउने कारिन्दाले सरकारी ढर्राको सिको गर्दै उच्च स्तरीय ढर्राको प्रार्दूभाव गर्छ । तेरो ढर्रा बेठिक मेरो ढर्रा ठीक भन्दै ढर्रै ढर्राको दोहोरी चल्छ । नेपाल हाँक्ने र नेपाल निर्माण गर्ने कारिन्दा नेताकै जुठो लाग्ने खलकमा पर्छ क्यार पहिलो पेश्की रकम झिकेपछि नेताको नातेदारले नेपाललाई दार्न र अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्छ । नेपाल हाँक्ने नेताहरू कमिसन कुम्ल्याउन पाएपछि त्यस्ता कारिन्दा खोजी खोजी कामको जिम्मा दिन्छन् । कामको नाममा सिन्को भाँचिदैन । क्रम दोहोरिन्छ । ढर्राका पर्रा फेरि छुट्न थाल्छन् । एवम् क्रमले नेपाल आमाको घाँटी ङ्याक्ने काम क्रम अविच्छिन्न रूपले जारी रहन्छ । तब त नेपालको विकास ढर्रै ढर्राको चेपुवामा परेर सधैँ तुही राख्छ । समयमा पैसा पाएपछि समयमै योजना, विकास निर्माणका कामहरू पूरा गर्नुपर्छ भन्ने इमानदारितालाई तिलाञ्जली दिन लाज शरम मान्दैनन् । लुट्न धुत्न र खाई खाई सुत्न पल्केका कारिन्दाहरू एकलज्जा परित्याज्य त्रैलोक्य विजयी भवेत् जप्न रुचाउँछन् । तिनै लोकको लाज पचाएर हसुर्ने हस्तिहरू ढर्राका तानाबाना बुन्दै नानाभाती खेल खेल्न र पेल्न बस्ती बस्तीमा मस्ताराम आज मात्र होइन अस्ति पनि थिए ।
काठमाडौँ लगायत देशको दुर्गतीमा ढर्राले अहं भूमिका खेल्दै आएको छ । साँच्चै ढर्रा नपारी काम गर्ने हो भने देश समृद्ध शाली हुने पाली हाम्रै हो तर हुँदैन । किनकि यहाँ विकासका नाममा ढर्रा पारेर धुत्ने बग्रेल्ती पाइन्छन् । ढर्रा त्यस्तो तत्त्व हो जसले पैसा खाओस् नखाओस् समय खाएर सखापै पार्छ । समयको सदुपयोग र समयलाई नबुझ्नेहरू सधैँ पछि परिराखेकै हुन्छन् । नेपाल विकास निर्माण र यावत पक्षमा पछि पर्नु नै समयको सदुपयोग नगर्नु हो । जहाँ समय खेर फाल्न ढर्राको खेल हुन्छ, जालझेल हुन्छ । बद्मासै बद्मासको मेल हुन्छ । बद्ख्याइँ पूर्वक धुत्न ठेलमठेल हुन्छ । त्यहाँ विकास निर्माण सबै फेल हुन्छ ।
देश मात्र होइन ढर्राले व्यक्तिलाई पनि तल पार्छ । जो मनुवा सोझो सिदा तरिकाले हाकाहाकी काम नगरी स्वाङ र ढर्राको पछि लाग्छ उसले बेलैमा अधोगति हात पार्छ । ढर्रा गर्ने मति र विवेकको अनुमतिका कारण ढर्रै ढर्रामा ऊ सामुन्द्रिक जलचर अक्टोपसको पन्जामा परेझैँ परिसकेको हुन्छ । ढर्रा पार्दा पार्दे पुर्खेउली सम्पत्ति सिनित्त सिद्धिन्छ । ढर्रा पार्दा पार्दै लोग्नेस्वास्नी नै एक अर्काको बाहुमा पुग्न सक्छन् । ढर्रा पार्दा पार्दे अभूतपूर्व सन्तान जन्मिन सक्छ । सन्तान जन्मिएपछि ढर्राले मात्र तङ्ग्रिन र लाठे हुन सक्दैन । ढर्रा रहित पालनपोषणले नै ऊ स्वस्थ र दीर्घ जीवी बन्न सक्छ भने पछि ढर्रालाई जो कसैले फलदायी तत्त्वमा समावेश गर्न मिल्छ ? एउटा घर निर्माण गर्दा ढर्रा पारेर तासको घरझै बनाइयो भने त्यसमा गरिखाने खप्पर र सिङगो ज्यानलाई कसरी ओत दिने ? समाजमा कसरी पोज दिने ? कमजोर संरचनाको न घर हुन्छ न भर हुन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारका कार्यालय, सङ्घ संस्था या व्यक्तिले जीवनलाई द्रुत गतिमा भरपर्दाे पाइनका साथ हाँक्ने हो भने ढर्राको पर्रा र छर्रा त्याग्नु पर्छ । जीवन र जगत्लाई सत्मार्गमा हेल्ने हो भने ढर्रासँग खेल्ने खेलाउने कौसल आजैका मिति देखि बन्द हुनु पर्छ ।
कतिपय ढर्रा पारेर गाडी चलाउँछु भन्दा भन्दै इहलिला बिसर्जन गर्न पुग्छन् । ढर्राले व्यक्ति र सिङगो जगत्लाई नै बिसर्जन गर्न सक्छ । त्यसैले ढर्रा हर खुसी, आपत विपद, उन्माद, उक्साहट, या मैमत्तु भएर पनि शिरोपर गर्नु भनेको आफूले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु हो । ढर्रालाई लक्ष्यभेदी अस्त्र मान्न सकिँदैन । ढर्रा काम चोरहरूको मागि खाने भरपर्दाे भाँडो हो । आँखामा छारो हाल्ने अचुक अस्त्र । त्यसैले हातेमालो गर्दै ढर्रा रहित व्यक्ति, समाज र देश निर्माणमा एक ढिक्का भएर दोहोरो स्वास प्रश्वास क्रिया जारी राखौँ ।
शिवशक्ति मार्ग, पोखरा–११, फूलबारी, कास्की
मोबाइल ः ९८०६६७७५९४